सर्वश्रेष्ठ १० इन्च व्हाइट मेमोरी फोम गद्दा आपूर्तिकर्ता | Rayson
रेसन औद्योगिक क्षेत्र, हूशा रोड, शीशान, फोशन उच्च-टेक जोन, गुआंग्डोंग, चीनमा। मुख्य उत्पादनहरू सर्वश्रेष्ठ १० इन्च व्हाइट मेमोरी फोम गद्दा आपूर्तिकर्ता
यो उत्पादन अत्यधिक विरोधी बैक्टीरियल हो। यसको सामग्री चिस्यान-विकींग गुणको विशेषता रहेको यसले खुट्टामा गन्ध पैदा गर्ने सूक्ष्मजीवहरूको विकासलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
रेसन ग्लोबल कं, लिमिटेड एक चीन-संयुक्त संयुक्त उद्यम हो, २०० 2007 मा स्थापना भयो जुन शीशान टाउन, फोसन हाई-टेक जोनमा अवस्थित छ, र यो वी जस्ता प्रख्यात उद्यमहरूको नजिकै अवस्थित छ।
हालसम्म रेसनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण पार गरिसकेका छन। हाम्रो नयाँ उत्पाद सहित सबै उत्पादनहरू नवीन डिजाइन, ग्यारेन्टी गुणस्तर, र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूको साथ आपूर्ति गरिन्छ। वर्षौंको विकास पछि, हामीले विश्वभरि हाम्रा ग्राहकहरूसँग दीर्घकालीन सहयोग सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं। कृपया सुनिश्चित हुनुहोस् कि हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरू निर्यात गर्ने अधिकार छ र वितरित सामानहरूमा त्यहाँ कुनै नोक्सान हुनेछैन। हामी तपाईको जिज्ञासालाई स्वागत गर्दछ र कल गर्दछौं। पूर्ण उत्पादन लाइनहरू र अनुभवी कर्मचारीहरूको साथ, रेसन स्वतन्त्र रूपमा डिजाइन, विकास, निर्माण, र एक प्रभावकारी ढंगले सबै उत्पादनहरू परीक्षण गर्न सक्दछ। सम्पूर्ण प्रक्रियाको दौरानमा, हाम्रा QC पेशेवरहरूले उत्पादनको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गर्नेछन्। यसका साथै, हाम्रो डेलिभरी समयमै हो र हरेक ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ। हामी आश्वासन दिन्छौं कि उत्पादनहरु सुरक्षित र ध्वनी ग्राहकहरु लाई पठाइएको छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् वा हाम्रो बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ us हामीलाई सिधा कल गर्नुहोस्। स्थापना भएदेखि, रेसनले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि उत्कृष्ट र प्रभावशाली समाधानहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्यो। हामीले आफ्नै आर स्थापना गरेका छौं& उत्पादन डिजाइन र उत्पाद विकासको लागि केन्द्र। हामी कडाईका साथ मानक गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाहरु का पालन गर्न सुनिश्चित गर्न को लागी हाम्रो उत्पादनहरु लाई हाम्रो ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई मिल्दछ। थप रूपमा, हामी सम्पूर्ण विश्वभर ग्राहकहरूको लागि बिक्री पछि सेवाहरू प्रदान गर्दछौं। ग्राहकहरु जो हाम्रो नयाँ उत्पाद वा हाम्रो कम्पनी को बारे मा अधिक जान्न चाहान्छन्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईं कुन भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ? LC हेराईमा / TT द्वारा, %०% Deposi र %०% शेष रकम शिपिंग कागजातहरूको against कामका दिनहरूमा प्रतिलिपिमा रहेको छ। कसरी रोल्ट अप गद्दा खोल्ने? १. आफ्नो बेडरूममा सपाट सतहमा दफ़्ती राख्नुहोस्, ध्यानपूर्वक गद्देलाई बाहिर तान्नुहोस् र तपाईंको ओछ्यानमा राख्नुहोस्। २. सतर्कतापूर्वक बाहिरी झोलालाई काट्नुहोस् फिसन्चो बनाएर निश्चित गर्नुहोस् कि प्लास्टिक खराब र गद्दे काट्नु हुँदैन, चक्कु मुद्दा नहाल्नुहोस्। Your. तपाईंको ओछ्यानमा भ्याकुम-छाप लगाइएको गद्दा रोल आउट 4.. गद्दे तुरुन्तै गद्दा गर्न थाल्छ, प्लास्टिकको झोलाको घडीसँग काट्नुहोस्, प्लास्टिकको झोला हटाउनुहोस्। A. तपाइँको नयाँ गद्दा पूर्ण विस्तार गर्न २ 24 घण्टा अनुमति दिनुहोस्। के म तपाइँको कारखानामा जान्छु? हो, हाम्रो कारखाना कुनै पनि समय भ्रमण गर्न स्वागत छ, हामी गुआन्झाउ Baiune अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नजिकै छौं, यो केवल एक घण्टा कारले लिन्छ, र हामी तपाईंलाई कार लिनको लागि कारको व्यवस्था गर्न सक्दछौं।
चीन मध्यम फर्म गद्दा निर्माता - रेसन
सर्वश्रेष्ठ आरामदायक आर्थिक आकार होटल गद्दा आपूर्तिकर्ता